Azia Atsimo: Fanehoan-Kevitra Momba Ny Fandraràna Ny Burqa Ao Frantsa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2011 17:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, عربي, বাংলা, Ελληνικά, English
Ny fandraràna napetraka tsy ela akory izay tao Frantsa momba ny burqa (niqab), voaly mandrakotra ny tava fitondran'ny Silamo, dia niteraka resabe teny anivon'ny tontolon'ny fitorahana bilaogy manerana izao tontolo izao. Tsy manondro mivantana na inona na inona mikasika ny burqa ilay lalàna ary antsoina hoe “lalàna mandràra ny fandrakofana ny tava eny amin'ny toerana iraisam-bahoaka”. Saingy ny fampiharana azy dia miantraika amin'ireo Silamo.
Niresaka momba izay olana izay ny maro tamin'ireo mpitoraka bilaogy Aziatika Tatsimo.
Sadiq Alam ao amin'ny Technology Of The Heart manolotra sasantsasany amin'ny antony nandràrana ny fitondràna voaly manarona ny tava ao Frantsa ary ny lalàna tamin'ny 2004 mandràra ny fitondrana marika famantarana na fitafin'ny finoan'ny tena any amin'ny sekoly natao ho an'ny daholobe. Manazava izy:
Ny ankabeazan'ireo mpitondra fivavahana silamo dia manaiky fa TSY zavatra tsy maintsy atao ny Fandrakofana Voaly Tanteraka ny Tava na hoe zavatra tsy maintsy tandremana ( na dia mitandrina izany ho toy ny fomba tsy maintsy atao amin'ny fivavahana arahany aza ny sasany). Maro ireo mpitarika Silamo no niteny fa SADY TSY manohana ny resaka voaly ry zareo no tsy manakiana ny fandraràna [..]
Noho ny kolotsaina maro samihafa avy any amin'ny niavian'ireo olona tonga sy nanaiky ny fivavahana Silamo, maro tamin'ireo fomba fihevitra sy fitafy maotina efa nisy teo aloha no nanjary singa iray ao anatin'ny kolotsaina Silamo ary tsy maintsy jerena amin'ny lafiny maha-kolotsaina azy, mialoha ny maha-ara-pinoana azy koa. Azo atao tsara ny mitafy maotina tsy misy idiran'izay resaka kolotsaina, foko, na fomba amam-panao misy any amin'ny tany na firenena hafa any.
Manamarika izy momba ny lalàna frantsay mandràra ny burqa:
Raha takatra tsara ny hoe tsy zavatra voadidy ho tsy maintsy atao amin'ny finoana Silamo ny fitondrana voaly manarona ny tava, fa fomba fanao ara-kolotsaina nahazatra ny razambe taloha, zavatra hafa mihitsy ny fandraràna azy. Raha raisina amin'ny hoe fahalalahan'ny tsirairay dia lasa zava-manahirana izy ity. Ny fanjakana na firenena iray milaza amin'ny vahoakany hoe itsy na ireo no hotafiana dia mifanohitra amin'ny demaokrasia, ny soatoavin'ny olona – ireo soatoavina ireo izay nohindrahindrain'ny repoblika frantsay fatratra.
Vondrona vehivavy Silamo manohitra ny fandraràn'i Frantsa ny fitondrana voaly mandrakotra ny tava, teo ivelan'ny Masoivoho Frantsay tao Londona. Sary an'ny Sinister Pictures. Copyright Demotix.
Dipika, mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy dia manoratra rehefa avy nandanjalanja tranga maro:
Mety misy angamba vehivavy te-ho afaka amin'ny fisalobonana voaly mandritra ny androm-piainan'izy ireo – ary mifaly anaty amin'izao fotoana izao fa afaka ihany tamin'izany.
Saingy rehefa misaina tsara mikasika azy io, dia tonga amin'ny tsoakevitra milaza aho fa hoe diso ihany io lalàna io. Satria ny ahiahiko amin'io lalàna io dia mifototra amin'ny hoe eritreretina ho toy ny teren'ny vadiny ireo vehivavy raha ny marina mba hitondra voaly tsy araka ny sitrapon-dry zareo. Saingy eritreritra fotsiny ihany izany. Azoko antoka fa betsaka ny vehivavy Silamo ao Frantsa. Ny sasany mety tsy te-hitondra ny voaliny, saingy teren'ny fianakaviany. Ny sasany, na sarotra amintsika aza ny hino izany, dia mety maniry ny hitafy azy io! Ary raha misy vehivavy tokana ao Frantsa te-hitafy azy io, zony tanteraka ny manao izany. Diso ny fanànana lalàna mandràra ny hananany io zo io.
Izay rehetra fandraràna dia ratsy rehefa manitsakitsaka ny fahalalahan'ny tenanao manokana. Na izany ny fandraràna ny voaly ao Frantsa, na ny fandraràna ny famarotana sigara ao Bhutan.
Raza Habib Raja manoratra ao amin'ny Pak Tea House:
Manokatra adihevitra filaozofika goavana ilay fandraràna, mikasika ny fomba fisaina toy ny hoe fandeferana, fahalalahana ny dikan'ny “laïcité” sy ny liberalisma. Io izao no adihevitra miainga ho an'ireo maka ny toeran'ny “laika” sy ny liberaly izay mahaliana ahy sady tena mendrika mihitsy ho resahana ao anatin'ny tontolon'ny ny liberaly sy ny “laika” ilay olana [..]
Tokony hiditra ao anatin'ny fahalalahana sy ny fandeferana ara-pinoana ny “laicité” ary amin'izay ihany izy vao ho tonga “laicité” amin'ny endrika liberaly vaovao. Ny “laicité” amin'ny fomba fitondran'ny frantsay azy dia tsy hitondra na inona na inona ho an'ny fahafantaran'ny maro ny hoe “laicité” ary tsy hety mihitsy ao anatina fiarahamonina marolafy. Vao mainka aza hanohintohina sy hanamafy ny fifanjevoana manodidina ny foto-kevitra momba ny “laicité” izany.
Hanakatonana ny adihevitra dia feno fanantenana i Sadiq fa hoe mety hitondra vokatra miabo io fandraràna io:
Ny vokatry ny fandraràna ny burqa dia mety ho tsara mihitsy satria manome vahana ny fidirana ao anaty fiarahamonina, ary manery hatramin'ireo Silamo (Ao Eraopa ry zareo ireo dia manana firehana hiaina ao anatin'ny boriboriny ihany) mba hahatakatra ny fomba amam-panaon-dry zareo, hampiana-tena sy hanavaka ny harena ara-kolotsainy amin'ny fampianarana sy fomba amam-panao mampiavaka azy. Io dia hanome fahafahana koa ireo Silamo mba hampianatra ireo tsy Silamo mikasika ny finoana arahany sy ny hoe ireo manaraka ny finoana Silamo dia tsy hoe ao anatina kolotsaina tokana / mihidy .